Sampan-draharaha fanoratana taratasy: Manakarama an-tserasera ny mpanoratra ny mpanoratra ho anao manokana eto Madagascar
Serivisy fanoratana taratasy eto Madagasikara mba hahatratrarana ny valiny indroa haingana!
Mpanoratra akademika mahay sy mpanohana 24/7/365, misy eto Madagasikara ankehitriny! Manome serivisy serivisy fanoratana taratasy izahay ary mikarakara ny fotoananao sy ny fiainanao manokana
Toetoetra 7 an'ny serivisy fanoratana taratasy an-tserasera tsara
Betsaka ny olona te hahalala raha azo atao ny mividy serivisy fanoratana taratasy amin'ny Internet. Eny ny valiny. Na dia miompana indrindra amin'ny fanomezana anao serivisy fanoratana taratasy mora vidy aza, ny tena tanjona dia ny hanome anao taratasy avo lenta, tsy misy fotony ary voaporofo. Tsy vitan'ny hoe manafatra azy ireo amin'ny Internet ianao fa hanome anao ny vidin'ny serivisy ho an'ny serivisy fanoratana lahatsoratra sy kalitao avo lenta ary tsara.
Araka ny voalaza, ny mpanoratra dia handray ny asany amin'ny maha-mpanjifa azy ary miasa amin'ny serivisy taratasy fianaranao taratasy avy any an-trano. Na izany aza, mila mahafantatra ianao fa tsy tokony hifanerasera amin'ny mpanoratra tena izy. Izay afaka manoratra ny anjaranao ary mahafeno ny fe-potoana farany nomena anao. Ireto misy zavatra sasany tokony hohamarininao alohan'ny hanakaranao mpanoratra an-tserasera:
Karazan-serivisy fanoratana - Tokony ho faratanao aloha ny karazana serivisy fanoratana taratasy tadiavinao. Midika izany fa ny mpanoratra dia tokony ho afaka hanome izay ilainao araka ny fepetra takiana manokana. Ohatra, raha mila mpanoratra mpanoratra lahatsoratra afaka mahafeno ny fe-potoana farany omenao ianao ary manome asa avo lenta dia fidio izay afaka mahafeno ireo fepetra takiana ireo. Raha tsy izany dia tsara ny hisorohana ny mpanoratra tsy miankina satria tsy mahay manome asa kalitao izy ireo.
Sanganasan'ny mpanoratra hafa - Misy fomba maro ahafahanao mahazo ny fanampian'ny mpanoratra mpanoratra lahatsoratra iray hafa noho ny outsourcing. Ny iray amin'izany dia ny fanoratana ny sangananao nosoratan'ny mpanoratra iray za-draharaha amin'ny sehatry ny fanoratana akademika na fanoratana. Zahao ny santionany lahatsoratra iray nosoratan'ny mpanoratra toy izany mba hahafahanao manana hevitra tsara kokoa momba ny fomba hividianana mpanoratra. Ohatra iray amin'ny santionany essay dia hita ao amin'ny tranokalan'ny orinasa iray izay manolotra serivisy fanoratana taratasy mahazatra mba hanomezana anao hevitra momba izay antenaina.
Serivisy fanoratana Essay mora vidy - Ny fomba malaza indrindra amin'ny fomba ahafahanao mahazo ny taratasinao nosoratan'ny mpanoratra matihanina dia amin'ny alàlan'ny serivisy fanoratana lahatsoratra mora. Na izany aza, io ihany koa no fomba mampidi-doza indrindra satria hatokisanao amin'ny olona tsy za-draharaha amin'ny fanoratana akademika na fanoratana. Fa avy eo, raha afaka mahita mpanoratra mpanoratra mora vidy ianao izay za-draharaha amin'ny fanoratana taratasy avo lenta dia mety izany. Raha te hahita mpanoratra mora vidy izay azo atokisana sy ampy talenta ianao dia tokony hanamarina azy. Ny fanamarinana ifotony dia tokony ahitana ny fanamarinana ny mari-pahaizana momba ny fianarany. Raha azo atao dia tokony mangataka tolo-kevitra vitsivitsy avy amin'ny mpampianatra anao, ny loharano misy anao na ny mpiara-miasa aminao taloha.
Fanolorana ny lahatsoratra: Tokony ho azonao antoka fa rehefa mividy ny mpanoratra an-tserasera ianao dia manolotra ny taratasinao any amin'ny tranomboky sy andrim-pikarohana samihafa. Izany dia hanampy anao hitahiry fotoana ary hanamora ny fizotrany ho anao. Raha ny mpanoratra no hanolotra ny taratasinao, dia tsy mila mividy kojakoja fanampiny ianao na fitaovana hanaovana ilay fandefasana.
Fepetra fandoavam-bola - Ny fifanarahana tsara dia tokony hanome ireto fampahalalana manaraka ireto momba ny fe-potoana fandoavam-bola: ny fe-potoana fandoavam-bola, daty fandoavam-bola, fe-potoana fandefasana ary fe-potoana. Tena zava-dehibe ny daty satria hamaritana hoe hafiriana no mety handraisanao ny taratasinao aorian'ny fandoavana ny vola. Misy orinasa manolotra ny serivisy hananana ny taratasinao ao anatin'ny 6 ora aorian'ny fandoavana. Raha tsy afaka manatitra ny taratasinao ao anatin'ny fe-potoana voafetra izy ireo dia tokony holavinao avy hatrany ny tolotr'izy ireo.
Fanohanana - Rehefa manakarama serivisy fanoratana taratasy an-tserasera ianao dia zava-dehibe ny fanananao olona afaka mamaly ny fanontanianao na ny sosokevitrao momba ny fanatsarana ny tetikasanao. Tokony ho profesora na akademia ity olona ity. Tsy mahazo manendry ny asanao amin'ny mpanolo-tsaina tsy akademika ianao satria mety tsy manana traikefa ilaina izy ireo hamaliana ireo fanontanianao. Ny asanao dia hojeren'ny matihanina ary hanome anao ny tolo-kevitr'izy ireo momba ny fomba hirosoana amin'ny taratasinao.